आमा याङ्ग्रीको काखमा एक रात ( भिडियाे ) - OSNepal
बैशाख १९, २०७८ आइतवार १९:४२ बजे
प्रकृति र आध्यात्मको दोभान । रंगविरंग गुँरास फुलेका पाखाका दृश्य । शान्त, शीतल अनि रंगीन । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको आमा याङ्ग्री (३७७१ मिटर) । जहाँबाट वरीपरी हिमाल देखिन्छन् । एउटा दुइटामात्र होइन दर्जनौँ । डाँडामा उभिँदा हिमालको चुचुरोमा ठोक्किएर फर्किएका हावाले तन र मनमा एक किसिमको ऊर्जा पैदा गर्छ । डाँडामा उक्लिँदाको कठीन अनुभुतिहरु त्यसै बिलाएर जान्छन् । प्राकृतिक मात्र होइन आध्यात्मिक हिसाबमा पनि यो डाँडाको महत्व छ । याङ्ग्रीको काखमा बसोबास गर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीहरुका कुलदेवी हुन् ‘आमा याङ्ग्री’ ।
भत्किएका पिच, जंगलको बाटो, हेलम्बु पुग्ने उत्साह तीव्र थियो । काठमाडौंको जहरसिंह पौवाको डाँडाबाट देखिएको दृश्यले हामीलाई लोभ्यायो । सुन्दर बारीका पाटाहरु, नागबेली कच्ची सडक, खुलेको मौसम हामीले एकछिन यो सुन्दर दृश्य क्यामेरामा कैद गर्‍याैँ ।
उकालो अनि कच्ची बाटो तिम्बुबाट माथि लागेपछिका जंगलमा चराहरुको चीरबीर आवाज, सुनसान बाटो । फाट्ट–फुट्ट ट्रकहरु भेटिन्थे । कालिजले बाटो काटिदिन्थ्यो । हामी एकछिन मोटरसाइकल रोकेर यस्ता दृश्यहरु हर्थ्यौँ । यस्तै अनुपम सुन्दरतासहहितको हाम्रो यात्रा अघि बढिरह्यो । उकालो अनि कच्ची बाटोमा मोटरसाइकल थचारिँदा भने कहिले पुगिएला तार्केघ्याङ भन्ने जस्तो अनुभुति पनि भइरहेको थियो ।
पश्चिमतर्फ ढल्किरहेको सूर्य अब डाँडापारी लुक्न खोजिरहेको थियो । सूर्यको पहेँलो प्रकाश अलि मधुरो हुन लाग्दा हामी तार्केघ्याङ पुग्यौँ । त्यहाँ पुगेपछि बास बस्नका लागि हाम्रो रोजाइमा पर्‍यो ‘होटल तार्केघ्याङ ।’
याङ्ग्रीको डाँडा र पारीपट्टि देखिएको मेलम्ची घ्याङले पनि हामीलाई आकर्षित गरिरहेको थियो । चिसो सिरेटो पनि चलिरहेको थियो । एकछिन तार्केघ्याङको दृश्य नियालेपछि हामीले होटलमा गएर थकाइ मार्‍याैँ । हामी बसेको होटलमा खाना भने नबन्ने रहेछ । बाहिर खाना बनाउनका लागि हामी बसेको होटलको दिदीले भनिदिनुभएको रहेछ । दिदीले भनेपछि हामीले थाहा पायौँ ।
अचम्म लागेको एउटा कुरा, यो ठाउँमा काटमार नचल्ने रहेछ । अर्थात् यहाँ मासु खान नपाइने रहेछ । होटलका सञ्चालकले भनेपछि हामीले थाहा पायौँ । ‘आमा याङ्ग्री’को काखमा बसेर काटमार किन गर्ने ? उहाँको भनाइ सुनेर हामी नतमस्तक भयौँ । स्थानीयका अनुसार यहाँ काटमार गर्दा मेघगर्जन, हावाहुरी चल्ने चट्याङलगायतको भय हुने गर्दछ । शेर्पा लवजमा होटल सञ्चालकको यी कुराहरु सुनेपछि हामीले टुङ्नाको धुन सुन्ने रहर व्यक्त गर्‍याैँ । तर त्यो सम्भव भएन ।
बिहान सबेरै उठेर बाहिर निस्कदा वरिपरी देखिएका हिमाल, अलिअलि मधुरो प्रकाशले तार्केघ्याङ झन् सुन्दर देखिएको थियो । चिसो पानीमा हातमुख धोएर हामी आमा याङ्ग्री डाँडामा चढ्न तयार भयौँ ।
करिब तीन घण्टाको उकालो यात्रापछि हामी आमा याङ्ग्रीको डाँडामा पुग्यौँ । जहाँबाट आँखै नझिम्काई दोर्जे लाक्पा, गणेश हिमाल, लाङटाङ हिमाल रेन्ज, गौरीशंकर रेन्ज, भैरब टाकुरा, ग्याल्जेन पिक, याङग्री हिमाल, किमसुङ, भेमडाङ हिमाल, उर्कुमा हिमाल, यान्सा छेन्जि हिमाललगायतका दर्जनभन्दा बढी हिमालहरु देखिएका थिए ।
मौसम खुलेको थियो । सिरसिर हावा पनि चलिरहेको थियो । डाँडामा ‘आमा याङ्ग्रीको घर’ बनिरहेको थियो । हामीले देखेका गुम्बाहरु गोलाकार हुन्थे । तर आमा याङ्ग्रीको गुम्बा सामान्यतया मन्दिरको आकारमा बनिरहेको थियो । किन यसरी बनिरहेको छ ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा स्थानीय तेन्जिङ दावाले हाम्रा लामा गुरुहरुले आमा याङ्ग्रीको मन्दिर यो आकृतिमा बनाउन सुझाव दिएको र गुरुहरुको आदेश अनुसार यो शैलीमा पुनर्निर्माण भइरहेको बताए ।